Huawei P30 gafere nde 10 rere | Gam akporosis
Huawei P30 meriri ndekọ ahịa nke P20
Ebe ọ bụ na e webatara ha na March, E gosipụtara Huawei P30s dị ka nso akpọrọ ka ọ ree nke ọma. Na ya igba egbe na China ị pụrụ ịhụworị, mgbe ha rere na sekọnd na ahịa mbụ ha. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kwadebere maka ụdị a iji nwee ezigbo ahịa n'ahịa. Ebe ọ bụ na ọ kwadoro na ha nwere nde isii kwadebere.
Mana ire ahịa na-arị elu karịa n'okwu a. Ebe ọ bụ na ahịa nke ụdị a nke Huawei P30 ekpughere mgbe naanị 85 ụbọchị na ere. N’ime ihe na-erughi ọnwa atọ Eresịla nde iri na ụwa.
N'ụzọ dị otú a, Huawei P30s ghọrọ ụdị nke ụdị ndị China na-ere ngwa ngwa. Ha karịrị ọnụ ọgụgụ nke usoro ndị gara aga dị ka P20 ma ọ bụ Nwunye 20. Ya mere, o doro anya na ọhụụ ọhụrụ a dị elu na-eweta ọtụtụ mmasị n'etiti ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa.
O di nwute, anyị amaghị otú e si ekewa ahịa n'ụdị a nke akara ndị China. Yabụ na anyị amaghị ọtụtụ nde P30 Pro erela na ole P30. Mana ahịa ndị ahụ 10 nde na-eme ka ọ dịkarịa ala kpochapụ mmasị ezinụlọ a na ekwentị na-akpali.
Ezigbo ahịa ndị a nke Huawei P30 gbakwunye na akụkọ na ụdị ejirila 100 nde ekwentị rere n’ime ọnwa ise. Ihe a niile n'agbanyeghị mgbochi US ugbu a, nke na-emetụta ahịa gị. Mana n'otu oge ahụ ọ na-enye anyị ohere ịhụ na ụlọ ọrụ ahụ amaala otu esi eme ka ọnụnọ ya sie ike n'ahịa.
N'ihi ya, ọ bụ ozi ọma maka onye ama ama ama ama ama nke China. Ebe ọ bụ na ekwentị ole na ole nwere ike ịnya isi na ha rere nkeji 10, dị ka ọ dị na Huawei P30s ndị a. Ọtụtụ pere mpe n'ime obere oge, mgbe ihe na-erughị ọnwa atọ ire ere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei P30 meriri ndekọ ahịa nke P20
Mmadụ nde itoolu na-egwu swiiti anwụrụ maka awa atọ na isii kwa ụbọchị
Google Chrome ruru nbudata nbudata 5